ဆည်းဆာနဲ့ Home Brew Beer ကို မြည်းမှာဆိုရင် Burbrit Brewery
18 May 2017 . 3:10 PM
ဒါနဲ့ ယူတို့ ဘျာ(Beer)သောက်တတ်တယ်မလား 😛 ။ အဲ နည်းနည်းပါးပါးသောက်တတ်တယ်ပဲဆိုပါတော့နော်။ အရင်ထိုင်ဖူးတဲ့ နားတွေငြီး အကင်အညှော်နံ့တွေမွှန်ထူနေတဲ့ ဘီယာဆိုင်မျိုးတွေကို စိတ်ညစ်တယ်၊ သောက်နေကျမဟုတ်တဲ့ ဘီယာအရသာ အသစ်လေးတွေကိုလည်း မြည်းစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စွန်းမိုက်တဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို ညွှန်ပါရစေ။
Burbrit Brewery တဲ့။ နေဝင်နေတဲ့မြစ်ပြင်ကြီးကိုငေးရင်း ဘီယာလေးစုပ်ရတဲ့အရသာအတွက် မြောက်ဒဂုံ ဘေလီတံတား အဆင်းနားကို သွားရမှာဆိုတော့ နေရာလေးကတော့ လှမ်းတယ်ပြောရမလားပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ကတော့ သွားတယ် ဟီး 😛 ။ အသွားလမ်းမှာ တောက်လျှောက်ရွာလာတဲ့မိုးက ပါရမီလမ်းပေါ် ကားကွေ့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ တိတ်သွားတယ်။ ဘေလီတံတား ဆင်းဆင်းချင်း မီးပွိုင့်မှာ ဘယ်ဘက်က ဦးဝိစာရလမ်းပေါ်ကိုကွေ့ဆင်းပြီးတော့ ပထမဆုံးစတွေ့တဲ့လမ်းမှာ ဘယ်ဘက်ကိုထပ်ကွေ့ ပြီးရင် ညာဘက်ကို ထပ်ကွေ့ ပြီးရင် ဘယ်ပြန်ကွေ့ (ဟယ် ကွေ့ထာ) လိုက်ရင် Burbrit ကို တွေ့ပါပြီတဲ့ဗျာ။ နေရာလေးက လှမ်းသလို လမ်းမကြီးကနေ ကွေ့ကောက်ပြီးဝင်နေရတာကလည်း နည်းနည်းတော့ညစ်ချင်စရာ ။ မြောက်ဒဂုံစက်မှုဇုံဝန်းထဲမှာ ဘယ့်နှယ် စိတ်ကူးပေါက်ပြီး ဖွင့်ထားတယ် မသိဘူးရယ် ။ ဆိုင်ရောက်တော့ တိတ်သွားတဲ့မိုးကို စကျေးဇူးတင်မိတာပါပဲ။ မိုးရွာနေလို့ မြစ်ကမ်းဘေးက စားပွဲမှာသာ မထိုင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆို ဒီဆိုင်ရဲ့အရသာဟာ ဘယ်ပြည့်စုံပါလိမ့်မလဲ။
ကျနော်တို့ရောက်တဲ့ ညနေ ၅နာရီခွဲကျော်ကျော်ဟာ Burbrit မှာစထိုင်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးအချိန်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်လည်းလျော့နေပြီး မကြာခင် နေဝင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Sunset လေး ကြည့်ရင်း လေကောင်းလေသန့်တွေရှူရင်း တစ်နေ့တာမွန်းကျပ်မှုတွေကို လျှော့ချလိုက်ဖို့… … ကျနော်ကတော့ ဘီယာစမှာလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ 😛 ။
ဘီယာအမျိုးအစားကတော့ ၅မျိုးရတယ်။ အရသာတွေမသိသေးတော့ Tasting Flights အတွဲလိုက်လေးပဲ အရင်မှာလိုက်တယ်။ ဘီယာခွက်လေးတွေ သစ်သားတန်းလေးပေါ်တင်ထားတာက ချစ်စရာလေး ။ အပျော့ဆုံး အရသာကနေ အပြင်းဆုံးကို စီချပေး ထားတယ်။ ဆိုတော့ အပျော့ဆုံးလေးကနေ စစမ်းတာပေါ့ဗျာ။
German Weizen တဲ့။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘီယာတွေထွက်တဲ့ Germany နိုင်ငံထွက် ဘီယာတစ်မျိုးရဲ့နာမည်ပေါ့။ နည်းနည်းပါးပါးစပ်စုလိုက်တော့ ဘီယာချက်ဖို့ Tankတွေ Tunတွေ၊ အဓိက ကုန်ကြမ်းတွေဖြစ်တဲ့ Malt တို့ Hops တို့ စတာတွေကို Germany ကနေပဲ မှာတယ် ။ အချဉ်ဖောက်တဲ့ Yeast ကိုတော့ Singapore ကနေ မှာတယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ချက်ပြီး ၂ပတ်ကြာ အအေးခံထားတဲ့ ဘီယာတွေကို စရောင်းချပါတယ်တဲ့။ အဲဒီGerman Weizenရဲ့ အရသာလေးက မချိုမချဉ် သက်သက်လေးရယ်၊ အပျော့ဆုံးဆိုတဲ့အတိုင်း တော်တော်ပျော့သဗျာ။ အရောင်ကလည်း အဖျော့ဆုံး။ အရသာပျော့ပျော့ကြိုက်သူတွေ၊ မိန်းကလေးတွေ နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒုတိယကောင်က Rangoon Blonde ။ အမယ် ငါတို့ မြို့နာမည်နဲ့ပါလား… မှန်း မြည်းကြည့်ရအောင် ။ သူက ကျနော်တို့ သောက်နေကျ ဈေးကွက်ထဲက ဘီယာတွေနဲ့ဆင်ပါတယ်။ ဆင်ဆို ဒီဆိုင်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော Lager beer လေးကိုဗျ ။ Smooth ဖြစ်တယ်။ မဆိုးဘူး။ ဒါပေမယ့် အနံ့မရှိသလောက်ပဲ။ လျှာပေါ်မယ် ရှတတနဲ့ ဝဲနေရမယ့် Aftertaste လေးလည်း မကျန်ဘူး။ ဒီဆိုင်က ဘီယာတွေမှာ အဲဒါလေးတွေတော့ သိပ်အားမရဘူး။ အဲ အားရတဲ့အပိုင်းက ပြီးရင်လာမယ် 😛 ။ နံပါတ် ၃ကတော့ အပြင်းဆုံးဗျ။ Burma Pale Ale တဲ့။ သူက Irish Red Ale (နံပါတ် ၅) နဲ့ အရောင်ရော အရသာရော ဆင်တယ်။ Stout အမျိုးအစားနှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေမယ်။ ကျနော်တော့ မကြိုက်ဘူး။ နံပါတ်မှာ (၄)ကတော့ English Bitter ပါတဲ့။ အရသာ လေးပါတယ် ၊ ရှပါတယ် ၊ Aftertaste ကောင်းကောင်းကျန်ပါတယ်။ နံပါတ်(၂) နဲ့ (၄)ကို ကျနော် သဘောကျပါတယ်။ သောက်နေကျ Taste နဲ့ နီးစပ်တဲ့ Rangoon Blonde ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။
မြစ်ပြင်ကြီးအလွန် ကိုင်းတောတွေထဲ နေဝင်သွားတဲ့ ညနေခင်းကြီးကို ငေးရင်း ဘီယာလေးတွေ မြည်းနေတုန်းပဲ ပြဿနာကစပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ခြင်တွေပါ ။ တော်တော်ကိုက်တယ် ဆိုတာထက် ကိုက်ပါတယ်။ Bass Drum Double Paddle နင်းသလို တစ်ချိန်လုံး ဒူးနှန့်နေရတယ်။ လက်လေ့ကျင့်ခန်းလည်းလုပ်ရတယ် ။ ပြီးတော့ မှောင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ပိုးကောင်တွေ လာပါတယ်။ အင်းပေါ့ မြစ်ဘေးဆိုမှတော့ အဲဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့။ ယူတို့လည်း ဒီကိုလာမယ်ဆိုရင် ခြင်မကိုက်တဲ့ ဆေးဗူးလေး ဘာလေး ဆောင်လာ ဖြန်းလာရင်တော့ ပိုအိုခေလိမ့်မယ်။
အသောက်ကိစ္စဆိုတော့ အစားကိစ္စလည်း ပါရတာပေါ့လေ။ ဆိုင်ဖွင့်တာကလည်း ၃လကျော်ကျော်ပဲ ရှိသေးတာရယ်၊ ဘီယာအဓိက ရောင်းတဲ့ဆိုင်ဖြစ်တာရယ်ကြောင့် Menuကတော့ နည်းတယ်ဗျ။ ဘီယာနဲ့မြည်းလို့ကောင်းတဲ့အမျိုးအစားတွေပဲ အဓိကတင်တယ်။ အဲဒါနဲ့ နည်းနည်းပါးပါးမေးမြန်းပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် Recommend ပေးတဲ့ ဆိတ်ဘယာကြော်ရယ်၊ ငါးအရေခွံကြော်ရယ်၊ ကိုက်လန်ကို မုန့်နှစ်နဲ့ကြော်ထားတာလေးရယ် မှာလိုက်တယ်။ ဟင်းပွဲတွေရတာ မြန်ပါတယ်။ လူရှင်းနေသေးလို့လားတော့ မသိဘူးပေါ့။ အရသာတွေ အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ ဆိတ်ဘယာကြော်လေးက ပျဉ်းတော်သိမ်နိုင်နိုင် မွှေးမွှေးလေးနဲ့ စားကောင်းလှတယ်။ ငါးအရေခွံကြော်လေးကလည်း တော်တော်ယွယွလေးရယ်။ ကျနော်က အငန်စားတဲ့သူဆိုတော့ ပေါ့သလိုရှိပေမယ့် ပုံမှန်စားတတ်သူတွေ အပေါ့စားသူတွေအတွက်တော့ အနေတော်ပါပဲ။ Sauce တွေလည်း စုံစုံလင်လင်ချပေးပါတယ်။ ကိုက်လန်မုန့်နှစ်ကြော် လေးကလည်းအဖိုင်းပဲဗျ ။ ဒါပေမယ့် အရွက်ကြော်ဆိုတော့ ပူတုန်းပဲ ဖိုင်းတာမလား။ အေးသွားတော့ စားမကောင်းတော့ဘူး။ အဲ အထူးခြားဆုံး ကတော့ သူနဲ့ တွဲစားဖို့ချပေးတဲ့ Sauce ပဲ။ မှိုတို့ မုန်လာဥနီတို့ကို ပါးပါးလှီးပြီး Sauce ချက်ထားတာ။ Sauce အချို သဘောပေါ့။ ပူပူနွေးနွေး အငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့။ မပျစ်မကျဲဗျာ ။ Sauce မကျ Soup မကျလေး။ တည်ခင်းပေးတဲ့ပမာဏ များတယ်။ သူ့ချည်း ဒီတိုင်းသောက်လို့လည်းကောင်းတယ်။ ကိုယ့်လူတစ်ယောက်ဆို အေးသွားလို့ပြန်နွှေးခိုင်းပြီး ဒီတိုင်း ထိုင်သောက်လိုက်သေးတာကလား 😀 ။
ဟင်းပွဲအပြင်အဆင်တွေက သပ်ရပ်သန့်ရှင်းပါတယ်။ လက်ရာတွေက အထူးခြားကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဈေးနှုန်းကလည်း တစ်ပွဲကို မြန်မာငွေသုံးထောင်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ သူ့နေရာနဲ့သူ အများကြီးတော့ မဆိုနိုင်ဘူး။ ဘီယာဈေးတွေကတော့ နည်းနည်းကြီးတယ်။ အင်း နည်းနည်းမကကြီးတယ် ဆိုပါတော့။ Tasting လုပ်တဲ့တစ်တွဲကိုတင် ခြောက်ထောင့်ငါးရာဆိုတော့ ကိတ်တယ်လို့ပဲဆိုပါရစေနော့။ ပြီးတော့ ဒီဈေးနဲ့ ဒီထက်ပိုထူးခြားတဲ့ အရသာမျိုးရသင့်တယ်လို့တော့ မြင်မိတယ်ဗျာ။ အဲ တစ်ခုတော့ ရှိသဗျ။ ကျနော် စောစောကပြောတဲ့ အားရတဲ့ အပိုင်းက ခုလာပြီ။ Tasting flights မကုန်ခင်လေးမှာတင် သွေးတွေ လေးလာသဗျ။ နည်းနည်းလေးနဲ့ရောက်တယ်ဆိုပါတော့။ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ Rangoon Blonde နောက်တစ် Pint သောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ စကားပြောရဆိုရကောင်း နေရထိုင်ရ အတော်ကောင်းသွားပါပြီ ဟီး 😛 ။ ပါးပါးပဲပုတ်မယ်ဆိုသူတွေအတွက်တော့ အိုခေပေါ့လေ။ (ရေးနေရင်းတောင် ပုတ်ချင်လာပြန်ပြီ.. ငါနော်)
ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးက မဆိုးပေမယ့် နည်းနည်းမှောင်တယ်ဗျ ။ အဲဒီတော့ ခြင်ပိုကိုက်တာပေါ့ဗျာ ။ Lighting လေး နည်းနည်း ဖြည့်သင့်တယ် ထင်တယ်။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Service က တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ Toilet သန့်ရှင်းမှု ရှိသလို Parking Area လည်း အဆင်ပြေတယ်။ အလုပ်ကအပြန် နားအေးပါးအေးထိုင်ချင်တဲ့ ရုံးသမားတွေ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ ၊ အေးအေးချမ်းချမ်း Dateချင်တဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေ၊ ဆည်းဆာကို ဖီးလ်လာသလောက် ငေးမယ်ဆိုတဲ့ တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေ အားလုံးအတွက် သင့်တော်တဲ့ Burbrit Brewery ပါဗျာ ။ နောက် အဆင်မပြေတာတစ်ခုကတော့ အပြန်မှာ ကိုယ့်ကားနဲ့ကိုယ် လာမယ့်သူတွေအတွက် ပြဿနာမရှိပေမယ့် Taxi ငှားမယ့်သူတွေကတော့ လမ်းမကြီးထိတော်တော် ပြန်ထွက်ရမှာကိုပါပဲ။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်က 4PM – 10PM ဆိုတော့ အလုပ်ဆင်း နောက်ကျတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အဆင်မပြေလှဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆည်းဆာနဲ့ Home Brew Beer ကို မြည်းမှာဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးရှိရင်တော့ မြို့ထဲဘက်မှာ ရှူမရတဲ့ လေကောင်းလေသန့်လေး ရှူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Burbrit Brewery ကို တစ်ခေါက်လောက် သွားကြည့်စေချင်ပါတယ်ဗျို့။ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ရှားပါးလာတဲ့ အေးချမ်းမှုလေးကို အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ ရခဲ့ကြလို့ပါ . . . ။
Taste – Beer ****
Taste – Food ****
Price – Beer **
Price – Food ***
Place -Location *****
ဒါနဲ့ ယူတို့ ဘြာ(Beer)သောကျတတျတယျမလား 😛 ။ အဲ နညျးနညျးပါးပါးသောကျတတျတယျပဲဆိုပါတော့နျော။ အရငျထိုငျဖူးတဲ့ နားတှငွေီး အကငျအညှျောနံ့တှမှေနျထူနတေဲ့ ဘီယာဆိုငျမြိုးတှကေို စိတျညဈတယျ၊ သောကျနကေမြဟုတျတဲ့ ဘီယာအရသာ အသဈလေးတှကေိုလညျး မွညျးစမျးခငျြတယျဆိုရငျတော့ စှနျးမိုကျတဲ့ ဆိုငျလေးတဈဆိုငျကို ညှနျပါရစေ။
Burbrit Brewery တဲ့။ နဝေငျနတေဲ့မွဈပွငျကွီးကိုငေးရငျး ဘီယာလေးစုပျရတဲ့အရသာအတှကျ မွောကျဒဂုံ ဘလေီတံတား အဆငျးနားကို သှားရမှာဆိုတော့ နရောလေးကတော့ လှမျးတယျပွောရမလားပဲ။ ဒါပမေဲ့ ကနြျောတို့ကတော့ သှားတယျ ဟီး 😛 ။ အသှားလမျးမှာ တောကျလြှောကျရှာလာတဲ့မိုးက ပါရမီလမျးပျေါ ကားကှလေို့ကျပွီဆိုတာနဲ့ တိတျသှားတယျ။ ဘလေီတံတား ဆငျးဆငျးခငျြး မီးပှိုငျ့မှာ ဘယျဘကျက ဦးဝိစာရလမျးပျေါကိုကှဆေ့ငျးပွီးတော့ ပထမဆုံးစတှတေဲ့ လမျးမှာ ဘယျဘကျကိုထပျကှေ့ ပွီးရငျ ညာဘကျကို ထပျကှေ့ ပွီးရငျ ဘယျပွနျကှေ့ (ဟယျ ကှထေ့ာ) လိုကျရငျ Burbrit ကို တှပေ့ါပွီတဲ့ဗြာ။ နရောလေးက လှမျးသလို လမျးမကွီးကနေ ကှကေ့ောကျပွီးဝငျနရေတာကလညျး နညျးနညျးတော့ညဈခငျြစရာ ။ မွောကျဒဂုံ စကျမှုဇုံဝနျးထဲမှာ ဘယျ့နှယျ စိတျကူးပေါကျပွီး ဖှငျ့ထားတယျ မသိဘူးရယျ ။ ဆိုငျရောကျတော့ တိတျသှားတဲ့မိုးကို စကြေးဇူးတငျမိတာပါပဲ။ မိုးရှာနလေို့ မွဈကမျးဘေးက စားပှဲမှာသာ မထိုငျဖွဈခဲ့ဘူးဆို ဒီဆိုငျရဲ့အရသာဟာ ဘယျပွညျ့စုံပါလိမျ့မလဲ ။
ကနြျောတို့ရောကျတဲ့ ညနေ ၅နာရီခှဲကြျောကြျောဟာ Burbrit မှာစထိုငျဖို့ အသငျ့တျောဆုံးအခြိနျလို့ ထငျပါတယျ။ ပတျဝနျးကငျြ အပူခြိနျလညျးလြော့နပွေီး မကွာခငျ နဝေငျတော့မှာဖွဈတဲ့အတှကျ Sunset လေး ကွညျ့ရငျး လကေောငျးလသေနျ့တှရှေူရငျး တဈနတေ့ာမှနျးကပျြမှုတှကေို လြှော့ခလြိုကျဖို့… … ကနြျောကတော့ ဘီယာစမှာလိုကျပါပွီခငျဗြာ 😛 ။
ဘီယာအမြိုးအစားကတော့ ၅မြိုးရတယျ။ အရသာတှမေသိသေးတော့ Tasting Flights အတှဲလိုကျလေးပဲ အရငျမှာလိုကျတယျ။ ဘီယာခှကျလေးတှေ သဈသားတနျးလေးပျေါတငျထားတာက ခဈြစရာလေး ။ အပြော့ဆုံး အရသာကနေ အပွငျးဆုံးကို စီခပြေး ထားတယျ။ ဆိုတော့ အပြော့ဆုံးလေးကနေ စစမျးတာပေါ့ဗြာ။ German Weizen တဲ့ ။ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးဘီယာတှထှေကျတဲ့ Germany နိုငျငံထှကျ ဘီယာတဈမြိုးရဲ့နာမညျပေါ့။ နညျးနညျးပါးပါးစပျစုလိုကျတော့ ဘီယာခကျြဖို့ Tankတှေ Tunတှေ၊ အဓိက ကုနျကွမျးတှဖွေဈတဲ့ Malt တို့ Hops တို့ စတာတှကေို Germany ကနပေဲ မှာတယျ ။ အခဉျြဖောကျတဲ့ Yeast ကိုတော့ Singapore ကနေ မှာတယျလို့ သိရပါတယျ ။ ခကျြပွီး ၂ပတျကွာ အအေးခံထားတဲ့ ဘီယာတှကေို စရောငျးခပြါတယျတဲ့။ အဲဒီ German Weizenရဲ့ အရသာလေးက မခြိုမခဉျြ သကျသကျလေးရယျ၊ အပြော့ဆုံးဆိုတဲ့အတိုငျး တျောတျောပြော့သဗြာ။ အရောငျကလညျး အဖြော့ဆုံး။ အရသာပြော့ပြော့ကွိုကျသူတှေ၊ မိနျးကလေးတှေ နှဈသကျမယျလို့ထငျပါတယျ။
ဒုတိယကောငျက Rangoon Blonde ။ အမယျ ငါတို့ မွို့နာမညျနဲ့ပါလား… မှနျး မွညျးကွညျ့ရအောငျ ။ သူက ကနြျောတို့ သောကျနကြေ ဈေးကှကျထဲက ဘီယာတှနေဲ့ဆငျပါတယျ။ ဆငျဆို ဒီဆိုငျရဲ့ တဈဦးတညျးသော Lager beer လေးကိုဗြ ။ Smooth ဖွဈတယျ။ မဆိုးဘူး။ ဒါပမေယျ့ အနံ့မရှိသလောကျပဲ။ လြှာပျေါမယျ ရှတတနဲ့ ဝဲနရေမယျ့ Aftertaste လေးလညျး မကနျြဘူး။ ဒီဆိုငျက ဘီယာတှမှော အဲဒါလေးတှတေော့ သိပျအားမရဘူး။ အဲ အားရတဲ့အပိုငျးက ပွီးရငျလာမယျ 😛 ။ နံပါတျ ၃ကတော့ အပွငျးဆုံးဗြ။ Burma Pale Ale တဲ့။ သူက Irish Red Ale (နံပါတျ ၅) နဲ့ အရောငျရော အရသာရော ဆငျတယျ။ Stout အမြိုးအစားနှဈသကျတဲ့သူတှအေတှကျ အဆငျပွမေယျ။ ကနြျောတော့ မကွိုကျဘူး။ နံပါတျမှာ (၄)ကတော့ English Bitter ပါတဲ့။ အရသာ လေးပါတယျ ၊ ရှပါတယျ ၊ Aftertaste ကောငျးကောငျးကနျြပါတယျ။ နံပါတျ(၂) နဲ့ (၄)ကို ကနြျော သဘောကပြါတယျ။ သောကျနကြေ Taste နဲ့ နီးစပျတဲ့ Rangoon Blonde ကိုတော့ အကွိုကျဆုံးပါပဲ။ မွဈပွငျကွီးအလှနျ ကိုငျးတောတှထေဲ နဝေငျသှားတဲ့ ညနခေငျးကွီးကို ငေးရငျး ဘီယာလေးတှေ မွညျးနတေုနျးပဲ ပွဿနာကစပါတယျ။ ဟုတျကဲ့ ခွငျတှပေါ ။ တျောတျောကိုကျတယျ ဆိုတာထကျ ကိုကျပါတယျ။
Bass Drum Double Paddle နငျးသလို တဈခြိနျလုံး ဒူးနှနျ့နရေတယျ။ လကျလကေ့ငျြ့ခနျးလညျးလုပျရတယျ ။ ပွီးတော့ မှောငျသှားတဲ့အခြိနျမှာ ပိုးကောငျတှေ လာပါတယျ။ အငျးပေါ့ မွဈဘေးဆိုမှတော့ အဲဒီလောကျတော့ ရှိမှာပေါ့။ ယူတို့လညျး ဒီကိုလာမယျဆိုရငျ ခွငျမကိုကျတဲ့ ဆေးဗူးလေး ဘာလေး ဆောငျလာ ဖွနျးလာရငျတော့ ပိုအိုခလေိမျ့မယျ။ အသောကျကိစ်စဆိုတော့ အစားကိစ်စလညျး ပါရတာပေါ့လေ။ ဆိုငျဖှငျ့တာကလညျး ၃လကြျောကြျောပဲ ရှိသေးတာရယျ၊ ဘီယာအဓိက ရောငျးတဲ့ဆိုငျဖွဈတာရယျကွောငျ့ Menuကတော့ နညျးတယျဗြ။ ဘီယာနဲ့မွညျးလို့ကောငျးတဲ့အမြိုးအစားတှပေဲ အဓိကတငျတယျ။ အဲဒါနဲ့ နညျးနညျးပါးပါးမေးမွနျးပွီး သူတို့ကိုယျတိုငျ Recommend ပေးတဲ့ ဆိတျဘယာကွျောရယျ၊ ငါးအရခှေံကွျောရယျ၊ ကိုကျလနျကို မုနျ့နှဈနဲ့ကွျောထားတာလေးရယျ မှာလိုကျတယျ။ ဟငျးပှဲတှရေတာ မွနျပါတယျ။ လူရှငျးနသေေးလို့လားတော့ မသိဘူးပေါ့။ အရသာတှေ အဆငျပွတေယျဗြ။ ဆိတျဘယာကွျောလေးက ပဉျြးတျောသိမျနိုငျနိုငျ မှေးမှေးလေးနဲ့ စားကောငျးလှတယျ။ ငါးအရခှေံကွျောလေးကလညျး တျောတျောယှယှလေးရယျ။ ကနြျောက အငနျစားတဲ့သူဆိုတော့ ပေါ့သလိုရှိပမေယျ့ ပုံမှနျစားတတျသူတှေ အပေါ့စားသူတှအေတှကျတော့ အနတေျောပါပဲ။ Sauce တှလေညျး စုံစုံလငျလငျခပြေးပါတယျ။ ကိုကျလနျမုနျ့နှဈကွျော လေးကလညျး အဖိုငျးပဲဗြ ။ ဒါပမေယျ့ အရှကျကွျောဆိုတော့ ပူတုနျးပဲ ဖိုငျးတာမလား။ အေးသှားတော့ စားမကောငျးတော့ဘူး။ အဲ အထူးခွားဆုံး ကတော့ သူနဲ့ တှဲစားဖို့ခပြေးတဲ့ Sauce ပဲ။ မှိုတို့ မုနျလာဥနီတို့ကို ပါးပါးလှီးပွီး Sauce ခကျြထားတာ။ Sauce အခြို သဘောပေါ့။ ပူပူနှေးနှေး အငှတေ့ထောငျးထောငျးနဲ့။ မပဈြမကြဲဗြာ ။ Sauce မကြ Soup မကလြေး။ တညျခငျးပေးတဲ့ပမာဏ မြားတယျ။ သူ့ခညျြး ဒီတိုငျးသောကျလို့လညျးကောငျးတယျ။ ကိုယျ့လူတဈယောကျဆို အေးသှားလို့ပွနျနှေးခိုငျးပွီး ဒီတိုငျး ထိုငျသောကျလိုကျသေးတာကလား 😀 ။
ဟငျးပှဲအပွငျအဆငျတှကေ သပျရပျသနျ့ရှငျးပါတယျ။ လကျရာတှကေ အထူးခွားကွီးမဟုတျပမေယျ့ ကောငျးတယျလို့ဆိုရမှာပါ။ ဈေးနှုနျးကလညျး တဈပှဲကို မွနျမာငှသေုံးထောငျဝနျးကငျြဆိုတော့ သူ့နရောနဲ့သူ အမြားကွီးတော့ မဆိုနိုငျဘူး။ ဘီယာဈေးတှကေတော့ နညျးနညျးကွီးတယျ။ အငျး နညျးနညျးမကကွီးတယျ ဆိုပါတော့။ Tasting လုပျတဲ့တဈတှဲကိုတငျ ခွောကျထောငျ့ငါးရာဆိုတော့ ကိတျတယျလို့ပဲဆိုပါရစနေော့။ ပွီးတော့ ဒီဈေးနဲ့ ဒီထကျပိုထူးခွားတဲ့ အရသာမြိုးရသငျ့တယျလို့တော့ မွငျမိတယျဗြာ။ အဲ တဈခုတော့ ရှိသဗြ။ ကနြျော စောစောကပွောတဲ့ အားရတဲ့ အပိုငျးက ခုလာပွီ။ Tasting flights မကုနျခငျလေးမှာတငျ သှေးတှေ လေးလာသဗြ။ နညျးနညျးလေးနဲ့ရောကျတယျဆိုပါတော့။ ကနြျောကွိုကျတဲ့ Rangoon Blonde နောကျတဈ Pint သောကျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ စကားပွောရဆိုရကောငျး နရေထိုငျရ အတျောကောငျးသှားပါပွီ ဟီး 😛 ။ ပါးပါးပဲပုတျမယျဆိုသူတှအေတှကျတော့ အိုခပေေါ့လေ။ (ရေးနရေငျးတောငျ ပုတျခငျြလာပွနျပွီ.. ငါနျော )
ဆိုငျအပွငျအဆငျလေးက မဆိုးပမေယျ့ နညျးနညျးမှောငျတယျဗြ ။ အဲဒီတော့ ခွငျပိုကိုကျတာပေါ့ဗြာ ။ Lighting လေး နညျးနညျး ဖွညျ့သငျ့တယျ ထငျတယျ။ ဝနျထမျးတှရေဲ့ Service က တျောတျောကောငျးပါတယျ။ Toilet သနျ့ရှငျးမှု ရှိသလို Parking Area လညျး အဆငျပွတေယျ။ အလုပျကအပွနျ နားအေးပါးအေးထိုငျခငျြတဲ့ ရုံးသမားတှေ မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှေ ၊ အေးအေးခမျြးခမျြး Dateခငျြတဲ့ ခဈြသူစုံတှဲတှေ၊ ဆညျးဆာကို ဖီးလျလာသလောကျ ငေးမယျဆိုတဲ့ တဈကိုယျတညျးသမားတှေ အားလုံးအတှကျ သငျ့တျောတဲ့ Burbrit Brewery ပါဗြာ ။ နောကျ အဆငျမပွတောတဈခုကတော့ အပွနျမှာ ကိုယျ့ကားနဲ့ကိုယျ လာမယျ့သူတှအေတှကျ ပွဿနာမရှိပမေယျ့ Taxi ငှားမယျ့သူတှကေတော့ လမျးမကွီးထိတျောတျော ပွနျထှကျရမှာကိုပါပဲ။ ဆိုငျဖှငျ့ခြိနျက 4PM – 10PM ဆိုတော့ အလုပျဆငျး နောကျကတြဲ့သူတှအေတှကျတော့ အဆငျမပွလှေဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဆညျးဆာနဲ့ Home Brew Beer ကို မွညျးမှာဆိုတဲ့ စိတျကလေးရှိရငျတော့ မွို့ထဲဘကျမှာ ရှူမရတဲ့ လကေောငျးလသေနျ့လေး ရှူခငျြတယျဆိုရငျတော့ Burbrit Brewery ကို တဈခေါကျလောကျ သှားကွညျ့စခေငျြပါတယျဗြို့။ ဒီဘကျခတျေမှာ ရှားပါးလာတဲ့ အေးခမျြးမှုလေးကို အဲဒီမှာ ကနြျောတို့ ရခဲ့ကွလို့ပါ . . . ။